रंगेली घटनामा ट्विस्ट : अवैध गर्भपछि आमाबाटै शिशु हत्या ! – Nepal Press
रंगेली घटनामा ट्विस्ट : अवैध गर्भपछि आमाबाटै शिशु हत्या !
२०७८ साउन १ गते १३:२६
दुई वर्ष अगाडि खुम्वुका श्रीमान् अरुण काम गर्न भारत गएका थिए । गएदेखि घर आएका थिएनन् । गत चैतमा भारतमा कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि अरुण घर आए । तर श्रीमान् घर आइपुग्दा खुस्वुको गर्भमा ५ महिनाको बच्चा थियो । श्रीमान्‌ले उक्त गर्भ आफ्नो भएको स्वीकार नगरेपछि उनीहरूबीच विवाद भएको थियो ।
दुई वर्ष अगाडि खुम्वुका श्रीमान् अरुण काम गर्न भारत गएका थिए । गएदेखि घर आएका थिएनन् । गत चैतमा भारतमा कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि अरुण घर आए । तर श्रीमान् घर आइपुग्दा खुस्वुको गर्भमा ५ महिनाको बच्चा थियो । श्रीमान्‌ले उक्त गर्भ आफ्नो भएको स्वीकार नगरेपछि उनीहरूबीच विवाद भएको थियो । अरुणले घटना बाहिर ल्याउनुभन्दा गर्भपतन गराउन चाहे ।
वडाध्यक्ष मण्डलले नेपाल प्रेससँग भने, ‘श्रीमान् विदेशमा कमाउन गएको बेला श्रीमतीको गाउँकै युवकसँग अवैध सम्बन्ध रहेछ । गत मंसिरमा गाउँमा बिहेमा जाँदा उनीहरूबीच शारीरिक सम्पर्क भएपछि बच्चा बसेको भनेर खुस्वु आफैंले भनेकी छन् ।’
ती युवक र खुस्वुको पहिलेदेखि नै सम्बन्ध रहेको प्रहरीसमक्ष उनले बताएकी छन् । वडाध्यक्ष मण्डलले श्रीमान्‌लाई अवैध सम्बन्धबारे जानकारी भएपछि दिनहुँजसो झगडा हुने गरेको बताए । अरुलाई शंका नहोस् भनेर बच्चा जन्मनेवित्तिकै श्रीमान् र बुबाआमा मिलेर हत्या गरी शव गाडेको उनले बताए ।
प्रकाशित: २०७८ साउन १ गते १३:२६